Global Voices teny Malagasy » Kianin’ny manampahefana ny fandrindran-kafanan-drivotra rehefa latsaka ao anaty aizina i Azerbaijan · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Jolay 2018 8:22 GMT 1	 · Mpanoratra Arzu Geybullayeva Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Endrika nohamaizinin'i ‘Fihaonan-dalan'i Baku amin'ny filentehan'ny masoandro’. sary ôrizinaly  avy amin'i vita86. Creative Commons.
Isan-taona — tamin'ny 24 marsa tamin'ity taona ity — niangavy ny tsirairay, vondrom-piarahamonina, ary ireo fihariana ny World Wide Fund for Nature (WWF) mba hamono ao anatin'ny adiny iray ny jirony ho saimbôlin'ny adidy ho an'ny planeta. Nanamarika ny Iray Oran'ny Tany i Azerbaijan tamin'ity taona 2018 ity, saingy nanangana fanariam-potoana raha nandatsaka tao anaty aizina nandritra ny alina manontolon'ny 3 Jolay.
Ity iray ity no iray  amin'ireo hanihany maro niely tao amin'ny media sosialy taorian'ny fahatapahan-jiro lehibe indrindra tao anatin'ny 15 taona mihoatra.
Ny zavamisy marina dia tsy nankafy loatra izany Iray Oran'ny Tany izany i Azerbaijan amin'ny maha fanjakana sôvietika taloha velomin'ny famokarana solika ahitana ny haratsian-drivotra indrindra  azy eto ambonin'ny tany izany. Ny fahamaizinana nanerana ny firenena dia vokatry ny fipoahana lehibe tao amin'ny tobim-pamokarana herinjiro lehibe avy amin'ny rano iray.
Rehefa nisavovona tao amin'ny media sosialy ny fitarainana, dia namoaka fanambaràna  miampanga ny hafanana ny biraon'ny Fiadidian'ny Filoham-Pirenena. Ny fampiasana tafahoatra ny fandrindran-kafanan-drivotra ao anatin'ny fitomboan-kafanàna tsy mbola niainan'ny firenena tao anatin'ny 120 taona — nahatratra 43 degre Celsius ny maripana — no anton'ny loza, hoy ny nolazain'ny birao. Niantso fitoniana ny minisiteran'ny vonjy taitra tao amin'ny fanambaràna  iray hafa. Na dia tafaverina aza ny jiro tamin'ny tolakandro, nampijanona tanteraka ny metrô tao an-drenivohitra Baku ny fahatapahan-jiro faharoa.
Tamin'ny taona 2002 no niainan'ny firenena iray manontolo izao fahatapahan-jiro nanerana ny firenena izany, izay vokatry ny loza avy tao amin'ny tobim-pamokaran-jiro efa voalaza teo ambony io ihany. Naneho hevitra  i Ilham Saban, manampahaizana manokana momba ny angovo, tamin'ny 3 jolay fa tsy mbola noraisina ny lesona avy tamin'izany fahatapahana izany. Nitaraina  tao amin'ny Facebook i Turgut Gambar, mpanorina ny hetsika sivika NIDA fa tsy hiankina amin'ny tobim-pamokarana herinjiro tokana ireo “firenena nôrmaly”. Nanoratra  tao amin'izany sehatra izany ihany koa i Altay Goyushov, mpampianatra ambony Azerbaijani:
Efa nandre firenena iray miara-maty amin'ny fotoana iray ny jirony rehetra ve ianao? Henoy izany ankehitriny. Tsy misy ny fampitahana hafa.
Ahitana resaka ambadika politika kokoa ireo hanihany sasany nivoaka nandritra ny #Azerbaijanblackout [fahatapahan-jiron'i Azerbaijan]. Ao anatin'ilay fiteny mahazatra fandre hoe “vonoy ny jiro rehefa mivoaka ianao”, nanao fihevitra  toy izao i Hebib Muntenzir avy ao amin'ny sehatra mahaleotena Meydan TV:
Mihevitra aho fa nandao ny firenena i Ilham Aliyev, ary talohakelin'ny nandehanany, nanome baiko izy ny hanidy ny fanapihan-jiro.
Tsy mahazaka ny fitsapan'ny fikorontanan'ny toetrandro ny rafitr'angovon'ny firenena sôvietika taloha
Tamin'ny tsikaritra no nahitana fa tapaka  niaraka tamin'ny fahatapahan-jiro ireo tranonkalan'ny governemanta, fotoana nety nahatsiarovana ny fahasarotana zakain'ny voafonja manerana ny firenena ihany koa izao fahatapahan-jiro izao. Shura Ibrahim, renin'i Giyas Ibrahim, lehilahy iray nigadra noho ny tsikera nataony ka fariparitana ho fanagadrana misy ambadika politika no nahazo azy, namariparitra toe-draharaha misy itovitovizana  amin'ny krizy mahaolombelona ao amin'ny fonja anagadrana an'i Ibrahim tao amin'ny antsafa nataony tao amin'ny RFE/RL amin'ny fiteny Azeri:
Vantany vao re tao amin'ny telefônina izy dia ny hafanana ao amin'ny fonja no hany voalazany. Nilaza tamiko izy fa tsy misy na inona na inona mandeha ao, simba ny rafitra fampiodinan-drivotra, tsy mandeha ny vata fampangatsiahana, tsy misy ny rano.
Mbola tsy vita ny kajikajin'ny fahasimbàna nateraky ny fahatapahana faobe. Na izany aza dia mbola tsy misy fiovana ny fototry ny firodanana — fiankinan-doha tanteraka amin'ny toby iray efa mizaka vesatra tafahoatra — mahakely ny fanantenana fa ho voasoroka ny firodanana tahaka izay nihatra raha miakatra indray ny hafanana.
Any amin'ny faritra tao amin'ny Firaisambe Sôvietika taloha, hatsiaka diso tafahoatra, fa tsy hafanana diso tafahoatra no nampisahotaka ny mponina eo ho eo amin'ny iray tapitrisa tao an-drenivohitr'i Kyrgyzstan tao Bishkek.
Torana ny toby fanafanan-kafanana tao rehefa nidina hatrany amin'ny 27 degre Celsius ambanin'ny zerô hatsiaka ka niteraka tsy fahafaliana faobe tamin'ny volana janoary rehefa voatery natory tao anatin'ny bodofotsy misavovona tao an'efitrano mangatsiaka sady mando ny mponina.
Efa voatsinjo fa narahina fiampangana kolikoly sy raharahan-keloka bevava avolenta nahafahan'ny firenena nahita  ny fampidirana am-ponja ny praiminisitry ny firenena sy ny ben'ny tanànan'i Bishek teo aloha mandritra ny fotoana maharitra ny tsy fisian-jiro.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/04/122334/
 sary ôrizinaly: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Baku_Boulevard_in_Evening.jpeg
 haratsian-drivotra indrindra: http://www.kt.kz/eng/ecology/almaty_is_one_of_ten_most_polluted_cities_in_the_world_1153441869.html
 Naneho hevitra: https://www.azadliq.org/a/enerji-teserrufatina-5-milyard-yatirilan-olke-musahibe-i%CC%87lham-shaban/29334869.html
 nanao fihevitra: https://www.facebook.com/hebib/posts/10216878215007440
 namariparitra toe-draharaha misy itovitovizana: https://www.azadliq.org/a/hebsxana-isti-ilqar-memmedov-qiyas-ibrahimov/29333568.html
 nahafahan'ny firenena nahita: http://www.thesundaily.my/news/2018/06/06/kyrgyzstans-ex-premier-arrested-corruption-charges